Emva kwe icandelo lokuqala y omnye umzuzwana Apho sithethe ngento esinokuyinikwa sisiphelo, siza kuchaza koku Okwesithathu kwaye okokugqibela yintoni enokwenziwa ngokwenyani ngale gadget, isikrini sayo esikhulu kunye nayo yonke into enokubakho yemultimedia enikezelwa ngulo mzalwana wosapho lweGlass.
Njengomdlali weendaba, siza kuqala ngokuthetha ngayo ukukwazi ukudlala umculo. Ayinakubethwa. la umgangatho weaudio nabo bonke iimeko zoqwalaselo ezibonelela ngokulinganisa kunye nezandi ziya kukwenza wonwabe kumculo owuthandayo. Nika ingxelo efanayo ngevidiyo. Ungabeka nayiphi na imovie kwiGlass Player yakho eya kuyivelisa ngaphandle kwengxaki. Ndizamile nomdlali oza nesixhobo kwaye akanangxaki yokuhambisa enye Umboniso bhanyabhanya we-720p HD (Khange ndivavanye i-1080p ngokwenene, nangona kubonakala kungenangqondo kwiscreen se-5-intshi). Iyakwazi nayo dlala umxholo wephepha lamaphepha ewebhu kakuhle kakhulu. Ukuba unesicelo se Uthotho lwe-Android Uyakwazi ukuchitha iiyure kunye neeyure ubukele uthotho lwakho oluthandayo ngaphandle kwengxaki.
Imemori ayilunganga. Le nguqulo inayo Imemori ye-8GB yememori yangaphakathi, ongaphezu kwe-5 yasimahla yezinto zakho, kwaye ngaphezulu kwe-1Gb kunye nesiqingatha sezicelo. Awuyi kuba nangxaki yalo naluphi na uhlobo ngememori, kodwa ukuba usafuna ngaphezulu, unesakhiwo sokwandisa ukubeka i-microSD ukuya kwi-32Gb. Ndicinga ukuba umculo omninzi awukuniki ixesha lokumamela. Mhlawumbi ukuba uyisebenzisa ukubeka iimuvi kwi-SD kwaye ushiye eyangaphakathi yeengoma zakho neefoto. Yitsho, ukuba imidlalo yeGameloft kunye nezinye iinkqubo, Basebenzisa i-SD yangaphakathi ukugcina idatha yabo. Izicelo zinokubambeka ukuze le datha iye kwi-microSD. Khange ndiyizame, kodwa ekubeni ikhona, ikho.
Uncedo olunikezelwa yile gadget ephethe i-Android, kukuba ukongeza, Unakho nasiphi na isicelo kwimarike okanye .apk ukuze ukwazi ukuyisebenzisa ngaphandle kwengxaki. Enkosi kwiscreen esine-intshi ezi-5, ungafunda amaphepha-ndaba owathandayo kwisikhangeli, jonga ukutya ngeGoogle Reader, iTwitter ngezandla ezimbini, ncokola kwiGtalk ngokukhawuleza… Onke amathuba anokukunikwa yi-Android, kule «incinci» isixhobo .
Iikhamera ezizisayo zingaphezulu ngokwaneleyo. Ukuba besele ndiyichazile ikhamera engemva yomgangatho ophakamileyo iphosiwe (ibandakanya i-3.2MPx enye), ayinangxaki ukurekhoda iividiyo ezikumgangatho ophezulu nokuba azikho kwi-HD kwaye iifoto zilungile xa zijonga isisombululo. Inkqubo ye- ikhamera yangaphambili yeVGA inika umdlalo omninzi xa kufikwa ekwenzeni ukubiza ividiyo ngeQik yeVidiyo, okanye ngayo nayiphi na enye inkqubo oyisebenzisayo.
La ujongano luyakhawuleza, kunye noopopayi abalungileyo, ngaphandle kokufikelela kugqithiso lweHTC Sense, ukuba yonke into iyabhampuza kwaye yonke into yenza intshukumo. Ujongano lweTouchwiz luhle kakhulu nangona kunokuba njalo isilela kancinci ngokwewijethi. Isebenza kakuhle kakhulu neFroyo nangona ndingazi ukuba i-Samsung iyakuze iphinde ihlaziye i-Gingerbread. Inkqubo iyakhawuleza, nokuba ihlalutya ikhadi le-MicroSD ukufumana zonke iintlobo zeefayile zemultimedia kwaye zidwelise ukuze zikwazi ukuzifumana kwiigalari nakubadlali lula.
Ukukhankanywa okhethekileyo kufanelekile kwi-Allshare Ndakhe ndathetha ngaphambili. Intuthuzelo yayo inkulu kakhulu. Ungadlala zonke iintlobo zeefayile phakathi kwezixhobo zemultimedia ezihambelanayo kwaye uzilawule naphi na apho ufuna khona.
Ibhetri ihlala ixesha elide. Ukunikezela ngenduku emnxebeni nokudlala uhlupheka kakhulu kwaye ayinakufika kwiiyure ezi-6 zevidiyo ukuba iyahlangana. Kodwa ngokujonga ubungakanani besikrini, i-2500mAh idosiwe kakuhle. Nangona iyinyani, nangona iphosiwe, inguqulelo ene-3G yokunxibelelana ngaphandle kwekhaya ayinakuba mbi, nangona oko kunganyusa iindleko.
Okokugqibela, masithethe ngokusebenza. Ndiye ndothuka. Ndacinga ukuba kuya kuba nzima kuye ukuhambisa imidlalo yeGameloftHD ejikeleze isikrini. Yithi ndinayo I-NOVA 2 efakwe kulo Mdlali weGalaxy kwaye ayibonisi naluphi na uhlobo lwe-lag, ukuphazamiseka okanye nayiphi na ingxaki onokuyilindela. Ingathatha imizuzwana emi-5 ukuya kweli-10 ubude kunokuba inokwenzeka kwi-Optimus 2X okanye kwi-Sensation, kodwa idlala ngokugqibeleleyo. Isamsung ngesicelo sayo sokufaka iiNkqubo zokusebenza sikunika iGlyder 2, Imalunga nokulawula nge-accelerometer intombazana enamaphiko "omlingo" ... Ewe, ibali alixhomekekanga, kodwa ulawulo kunye nemo engummangaliso, okwenza ukuba ophambili abhabhe, afezekise uthotho lwemiceli mngeni, bonisa ukuba le ndawo ikumgangatho wabantu abaninzi abakwimarike. I-benchmar ebuyiswe yi-Quadrant ihlala ibeka ngaphezulu kwe-Galaxy S. Kuvavanyo lwevidiyo ayikhe yehle ngaphantsi kwe-25fps kwezo zifuna owona msebenzi. Sithetha ngamanqaku ayi-1120 phantse ngalo lonke ixesha, xa kuthelekiswa nama-850 afunyanwa ngumkhuluwa wakhe (ngokobudala kungengobukhulu). Kuyabonakala ukuba i-ARMv7 eqhuba le MP4 inamandla nangona "iye kuphela" iya kwi-1GHz kwaye "kuphela" inesiseko esinye.
Ngaba ungacebisa abahlobo bam ukuba bathengele wena? Ndicinga ngokuthenga enye. Zijikeleze i- € 250-280 kwiivenkile ezininzi zekhompyuter. Yeyona gadget ilunge kakhulu, inika umdlalo ongaphezulu kune "intshi ezintathu-into" yeefowuni ezininzi. Ndonwabile ukufunda nokubhala. Liqabane elilunge kakhulu lokuhamba ngomculo kunye nevidiyo, okanye ixesha lokuzonwabisa. Yinto yonke-in-nye, ukuze "ukwazi" ukuyiphatha epokothweni, kwaye ungathenga ngemali encinci epokothweni yakho, ngaphandle kwemali yedatha okanye isigxina.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Reviews » Uvavanyo lwe-Samsung Galaxy S Wifi 5.0 (III)
Umbuzo, ukuba awunayo i-3G, zisebenza njani iimephu zikaGoogle?
Isebenza kuphela nge-wifi. Ndisebenzise isikhangeli esingaxhunyiwe kwi-intanethi, sigyc
Molweni nonke, ndicinga ngokuthenga le Samsung, ndiyifumene nge-229 euros, ndifuna ukukubuza umbuzo onokuba usisidenge, ndine-USB ye-Intanethi esuka kuVodafone, ucinga ukuba nge-microusb ukuya kwiadaptha ye-USB unokuba ne-intanethi kumvelisi? Enkosi kwaye uxolele ukuba umbuzo awunangqondo
Ukubulisa kummelwane wesixeko, kule veki kumatheko.
Bendingazi ukuba ndenze ibhlog yesixeko sam
Umbuzo omnye ndinayo le Mini tablet kwaye kuyamangalisa ukuba sele ndiyihlaziyile ngo-Kies ukuya kwi-2.3 Gingebread ..!
Ewe ndifuna ukwazi ukuba uyifumene njani i-nova 2. Ndiyayikhangela kwaye andinakho ukuyifaka, ithi ayihambelani.
UDaniel yepezz sitsho
Ngaba iya kuphuculwa iye kwi-ce cream sandwich ???????
URicardo Da Silva Graça sitsho
Kutheni le nto umdlali wam we-galaxy samsung angakhangeli iinethiwekhi?
I-Samsung yam ayiphenduli kodwa iyaqhubeka, kwenzeka ntoni?
Phendula ku 5792565